စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲ ( ဖြာပုံခရိုငျ၊ ဖြာပုံမွို့နယျ (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀) – Than Lwin
သံလှငျ(Citizen Empowerment Program) အဖှဲ့မှစီစဉျသညျ့ ရပျကှကျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအပျေါပွညျသူတို့၏သဘောထားအမွငျ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲကို ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ဖြာပုံခရိုငျ၊ ဖြာပုံမွို့နယျ (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀) ရကျနမေ့နကျပိုငျးတှငျ ကြောငျးကုနျးကြေးရှာ၊ ကြုံကဒှနျးကြေးရှာနှငျ့ ကဇောငျးကြေးရှာတို့ရှိ ပွညျသူမြားဖွငျ့လညျးကောငျး၊
နလေ့ယျပိုငျးတှငျ မွို့ပျေါ အမှတျ(၃)ရပျကှကျ၊ အမှတျ(၅)ရပျကှကျ၊ အမှတျ(၁၄)ရပျကှကျနှငျ့ အမှတျ(၁၉) ရပျကှကျတို့အတှငျးရှိ ပွညျသူမြားဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အပိုငျးနှဈပိုငျးခှဲကာပွုလုပျခဲ့သညျ။
၎င်းငျးဆှေးနှေးပှဲတှငျ ရပျကှကျကြေးရှာနပွေညျသူမြားမှ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား၏ မိမိတို့ဒသေအတှငျး ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ လကျရှိလုပျဆောငျနသေော ဆောငျရှကျခကျြမြားအားလညျးကောငျး၊ ပွညျသူလူထုနှငျ့ဆကျဆံရေးအခွအေနေ၊ ရပျရှာလုံခွုံရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမျးတံတားမြားအခွအေနနှေငျ့ သောကျသုံးရကေနျမြား၊ ရနေုတျမွောငျးမြား၏အခွအေနေ၊ လယျယာမွရေရေရှိမှုအခကျအခဲမြားနှငျ့ လိုအပျခကျြမြားကိုို ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဤသို့ သံလှငျ(Citizen Empowerment Program) အဖှဲ့နှငျ့အတူ ပွညျသူလူထုအမွငျသဘောထားစဈတမျးကောကျယူခွငျးနှငျ့ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲမြားတှငျ တကျကွှစှာ ကူညီဆောငျရှကျပေးပါသော ဦးရဲအောငျ(OMI)၊ ဒသေခံ ရလေုပျသားဖှံ့ဖွိုးရေးအဖှဲ့ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအားလညျးကောငျး၊ စဈတမျးကောကျယူစဉျ စိတျရှညျစှာ ဖွကွေားပေးခွငျး၊ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ပါဝငျဆှေးနှေးပေးပါသော ကြေးရှာ/ ရပျကှကျနပွေညျသူမြားအားလညျးကောငျး၊ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး မှတျတမျးတငျအပျပါသညျ
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဖျာပုံမြို့နယ် (၂၄ . ၂. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကျုံကဒွန်းကျေးရွာနှင့် ကဇောင်းကျေးရွာတို့ရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၁၉) ရပ်ကွက်တို့အတွင်းရှိ ပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ မိမိတို့ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းတံတားများအခြေအနေနှင့် သောက်သုံးရေကန်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများ၏အခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေရေရရှိမှုအခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဤသို့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စိတ်ရှည်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါသော ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအားလည်းကောင်း၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်
Previous Post: ရပျကှကျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအပျေါပွညျသူတို့၏သဘောထားအမွငျ စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲ( ဖြာပုံခရိုငျ၊ ကြိုကျလတျမွို့နယျ(၂ . ၂. ၂၀၂၀)
Next Post: စကားဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲ(ဒေးဒရဲမွို့နယျ) 25.2.2020